Rooble oo hawada loo mariyey baaq ka dhan wasiir ku jira Xukuumada magacaaban
Rooble oo hawada loo mariyey baaq ka dhan wasiir uu magacaabay
Posted On 20-10-2020, 07:03AM
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha xisbi siyaasadeeeka Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa eedeeyay madaxweynaha waqtiga kasii dhacayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siyaasi Warsame ayaa sidoo kale wuxuu bogaadiyey xubnaha cusub ee kusoo baxay Xukuumada 20aad ee Soomwaliya.
Isaga oo cuskanaya xubin ku biirtey golaha, Farmaajo ayuu si gaar ah ugu eedeeyay "dhiiragelinta gacan ku dhiigleyaasha".
"Waxaan bogaadinayaa xubnaha loo magacaabay Golaha Wasiirada. Waxaana ILAAHEEY uga baryayaa in uu hawshooda u fududeeyo," ayuu kusoo qoray Facebook.
Wuxuu ku daray: "Waxaase arrin laga naxo ah in C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo horay u ahaa Ku-simaha Taliyaha Nabadsugidda Qaranka, hormuudna u ahaa kooxdii 17-kii Diseembar 2017-kii weerarka ku soo qaaday xarunta Xisbiga Wadajir loo magacaabo Wasiirka Caddaaladda".
"Tani waxay tusaale u tahay sida ay kooxda Madaxweyne Farmaajo uga go’an tahay dhiiragelinta gacan ku dhiiglayaasha, ku tumashada caddaaladda iyo damqinta boogaha," ayuu raaciyey.
Qoraalkiisa ayuu kusoo xiray: "Waxaan ugu baaqaynaa Ra'iisul Wasaare Rooble in uu go’aan degdeg ah arrinkaas ka qaato, iska fogeeyo shakhsiyaadka diiwankoodana madowyahay, kuna caan baxay xadgudubka sharciga iyo ku tumashada xuquuqul insaanka".
Weerarka hoyga siyaasiga ayaa kamid ah "tacadiyada ugu culus" ee maamulka Farmaajo ku kacay mudada uu xafiiska joogo, waxaana ku nafwaayey askar Soomaali ah oo ilaalo ka ahaa xarunta Xisbiga Wadajir.